Muhiimada qudbadihii maanta laga jeediyay furitaan shirka…
By axadle On Jul 11, 2020
Magaaladda Dhuusamareeb ee Caasimada Dowlad-boleedka Galmudug ee Dhuusamareeb waxaa goordhow ka furmay shirka wadatashiga Hogamiye-yaasha Dowlad-boboleedyada 5 ah ee dalka.
Madasha uu shirku ka furmayo oo ah xarunta Madaxtooyada ku meel gaar ah ee Dowlad-goboleedka Galmudug ayaa waxaa xaadiray madaxweyne-yaasha Maamuladda Galmudug, Puntland, Hirshabeelle, Koofur Galbeed iyo Jubbaland, xildhibaano iyo senatoro ka tirsan ee baarlamaanka faderaalka Soomaaliya, wafooda Maamul goboleedyada dalka, ururada bullshasa rayidka iyo Saxaafada madaxa-banaan.
Hogamiyaha Dowlad-boleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor qoor oo marti loo yahay ayaa furay shirkaan waxa uuna u mahadceliyay dhamaan madaxda Dowlad-boleedyada dalka isaga oo rajo wanaagsan ku muujiyay in shirkaan ay ka soo baxaan qodobo dhan u ah hormarinta dowlad-dhisada Soomaaliya iyo arimaha doorashooyinka oo hada taagan.
Waxa uu sheegay Hogamiye Qoor qoor in shirkaan uu soo aaday xilli aysan mudo kulmin madaxda Dowlad-goboleedyada dalka. “Ujeeddada gogosha aan dhignay caasimadda GM, waxaa ay tahay, in xal rasmi ah laga gaaro, xalka doorashooyinka Qaran ee innagu soo food leh”. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor
Qoor qoor ayaa sheegay in aysan jirin wax ka muhiimsan doorasho maanta laga hadli lahaa maanta isla markaana u jeedka shirku yahay in looga wada hadlo arimaha doorashooyinka ayna muhiim tahay in laga wada hadlo.
Hogamiyaha Dowlad-goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo dhankiisa kulan ka hadlay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay shirkaan uuna rajaynayo in shirkaan ay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo dan u ah arimaha doorashooyinka dalka.
Waxa uu sheegay in nidaamka faderaalka yahay mid looga adeegaya bulshada Soomaaliyeed si looga shaqeeyo hormarinta bulshada.
“Nidaamka federaalka waa masaaliix guud, waa sababta aan maanta halkan u fadhino, Nidaamka Federaalka ma ahan wax kala geynaya ummadda” ayuu yiri Siciid Deni.
Beesha Caalamka ayuu ugu mahadceliyay doorka ay ka qaateen wadahadalka iyo dib u dhiska Soomaaliya isaga oo shaciyey in ay muhiim tahay in beesha Caalamku dowlad-goboleedyada dalka ku tixgaliso aragtidooda hormarinta dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
Hogamiyaha Dowlad-goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo bogaadiyay shirkaan ayaa sheegay in dastuurka dalka u ogolyahay in ay yeesheen wadatashi iyo sidoo kale wadahal dhexmaro.
Waxa uu sheegay in Maamulkiisa xuduud la leeyahay Dowlad-goboleedyada Jubbbland iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale Gobolka Banaadir loona baahanyahay in ay kawada shaqeeyaan amaanka iyo is dhexgalka.
Waxa uu sheegay in Dowladaan ay samaysay hormaro lataaban karo loona baahanyahay.“Doorasho dhici doonta, oo waqtigeeda ku dhici doonto, doorasho dadka soomaaliyeed oo dhan heshiis ku yihiin sida madaxda dowladda sheegtay, golaha wasiirada ku baaqeen Hogamiyaha ku taageeray, dooarshada aan rabno oo dhici doonto waa doorasho dadka soomaaliyeed heshiis ku yihiin”.ayuu yihi Hogamiye Laftagareen.
Hogamiyaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ee oo shirka hadlay ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka looga fadhiyay doorasho qof iyo cod ah maanta aysan muuqan loona baahanyahay qaab kale oo loo qabto doorasho heshiis lagu wadayahay.
Waxa uu sheegay in uu rajaynayo in shirkaan ay ka soo baxaan qodobo dan u ah arimaha doorashooyinka iyo siyaasada dalka.
Waxa uu sheegay in ay jiraan qodobo badan oo muhiim ah isla markaana horyaala dowladda iyo dowlad-goboleedyada dalka sida doorashooyinka, amaanka iyo fulinta dhamaan qodobadii horay loogu heshiiyay.
Ugu dambayntii waxaa shirkaasi ka hadlay Hogamiyaha Dowlad-goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo hadlay shirkaasi ayaa sheegay in ay Galmudug ku talaabsatay hormaro la taaban karo isla markaana ay Galmudug u danqatay shacabka Soomaaliyeed iskuna keentay sida uu hadalka u dhigay.
Arimaha dastuurka ayaa soo hadal qaaday madaxweyne “Waxaa maalmahan batay in dastuurka la tuuro, waxaa lagu leeyahay waa qabyo dastuurka qabyo maaha, waa turjumaad qaldan kalmada ingiriiska draft, illaa laga ansixiyo, Jabuuti laga soo bilaabay wax caqli naga maqan bannaanka ka jira ma jiraan, waa iska hor imaanayaa la yiraahdaan ma jiraan, waxay ku xiran tahay in il naxariis lagu fiiriyo in niyad wanaag lagu fasiro, waxay u baahan tahay il hooyo in lagu fiiriyo oo aan il eeddo lagu fiirin”
Waxa uu sheegay Dr Waare in ay muhiim tahay in aan eed loo jeedin Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka aan loo jeedin eed ee Hogamiyayaasha Dowlada Faderaalka Soomaaliya iyo Dowlad-goboleedyadu ay ka heshiiyaan doorashooyinka iyo arimaha Masiiriga ah ee dalka.
Hogamiye Hirshabeelle ayaa shaciyey in ay muhiimtahay in laga wadatashada Maqaanka Magaaladda Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya aysan jirin sabab dib loogu dhigo in laga hadlo matalaada Gobolka Banaadir.
Waare ayaa Xusay in canshuur ahaan Ganacsatada Muqdisho looga qaado ku dhawaad 1 bilyan oo doollar lagana qaado culayska badan ee amni daradu u dheertahay sida uu hadalka u dhigay.
Hogamiyaha Dowlad-boleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor qoor ayaa soo xiray shirka maanta ka furmay Dhuusamareeb waxana uuna mahadceliyay ka soo qayb galayaasha iyo intii gacan kagaystay shirkaan isaga oo rajo wanaagsan ka muujiyay waxa ka soo bixi kara shirkaan.